Zimbabwe bans mining in safari parks, activists want new law — Quartz Africa
A group of elephants and giraffes walk near a watering hole inside Hwange National Park, in Zimbabwe
Environmental and biodiversity experts in Zimbabwe are demanding president Emerson Mnangagwa’s government put into law a new policy position banning mining in game reserves after the approval of two Chinese companies to explore for coal in the Hwange National Park sparked global outrage.
Zimbabwe’s vast wildlife, unique vegetation, and eye-catching landscapes are a key attraction for tourists whom authorities are hoping to shore up the country’s foreign currency coffers when international flights—which have been on hold due to the global pandemic—resume at the beginning of next month. Tourism earnings help fund wildlife conservation programs in Zimbabwe.
After the government approved special grants for two Chinese coal mining companies to explore for coal in the vast Hwange National Park, it emerged there are more mining activities happening in other national parks. This has angered conservationists and campaigners for a safe Zimbabwe environment, who are now demanding that the government put into law its new policy stipulating that “mining on areas held by National Parks is banned with immediate effect,” as agreed by Mnangagwa’s cabinet on Sept. 8.
Advocacy groups such as Center for Natural Resource Governance Zimbabwe have been highlighting that mining activities in national parks extend beyond Hwange. The CNRG said this week that “Special Grants (for mining) were also issued in the Chizarira National Park and Umfurudze” game park for “coal mining” as Zimbabwe sought to railroad coal mining projects to shore up coal thermal production of electricity to end current power deficits.